1. Nnipa pii te nka dɛn wɔ som a wɔsom Onyankopɔn ne wɔn man no ho?
SO ƐSƐ sɛ wosom Onyankopɔn anaa ɔman a wote mu no? Nnipa pii bebua sɛ, ‘Mekyerɛ obu ma n’abien nyinaa. Mesom Onyankopɔn sɛnea m’asɔre kyerɛ me; na bere koro no ara medɔ me man.’
2. Ɔkwan bɛn so na na Babilon hene yɛ nyamesomfo ne amammuini?
2 Ebia yehu nsonsonoe kakra wɔ ɔsom mu ahofama ne ɔman ho dɔ mu nnɛ, nanso wɔ tete Babilon no, na nsonsonoe biara nnim koraa. Nokwarem no, na amansɛm ne nyamesom yɛ ade koro ma ɛtɔ da bi a, wonhu emu nsonsonoe. Ɔbenfo Charles F. Pfeiffer kyerɛw sɛ: “Wɔ tete Babilon no, na ɔhene no yɛ Ɔsɔfopanyin ne ɔman no sodifo. Na ɔbɔ afɔre ahorow kyerɛ ɔsom mu amanne a ɛsɛ sɛ ne manfo yɛ.”
3. Dɛn na ɛkyerɛ sɛ na Nebukadnesar yɛ obi a ɔpɛ nyamesom paa?
3 Susuw Ɔhene Nebukadnesar ho hwɛ. Ne din ankasa kyerɛ “O Nebo, Bɔ Ɔdedifo no Ho Ban!” Ná Nebo yɛ Babilonfo nyansa ne kuayɛ nyame. Na Nebukadnesar yɛ obi a ɔpɛ nyamesom paa. Sɛnea yɛaka dedaw no, osii asɔredan pii maa Babilon anyame pii na osiesiee mu fɛfɛɛfɛ, na na ɔsom Marduk, nea ɔkyerɛe sɛ n’akodi mu nkonimdi fi no no titiriw. * Ɛda adi nso sɛ Nebukadnesar de ne ho too adebisa so de yɛɛ n’akodi ho nhyehyɛe.—Hesekiel 21:18-23.
4. Ka Babilon nyamesom ho asɛm.
4 Nokwarem no, na nyamesom atrɛw wɔ Babilon nyinaa. Na kurow no wɔ asɔredan bɛboro 50, a emu na wɔsom anyame ne anyamewa pii, a baasakoro anyame a wɔne Anu, (wim nyame), Enlil, (asase, mframa, ne ahum nyame), ne Ea, (nsu nyame) ka ho. Na baasakoro anyame foforo ne Sin (ɔsram nyame), Shamash (owia nyame), ne Ishtar (abawo nyamewa). Na ntafowayi, adebisa, ne nsoromma mu hwɛ yɛ Babilonfo som mu nneɛma atitiriw.
5. Nyamesom a na ɛwɔ Babilon no maa Yuda nnommum no hyiaa ɔhaw bɛn?
5 Nnipa a na wɔsom anyame pii a Yudafo nnommum ne wɔn trae no ma wohyiaa ɔhaw a emu yɛ den. Na Mose abɔ Israelfo no kɔkɔ wɔ mfehaha a atwam no mu sɛ, sɛ wɔpaw sɛ wɔbɛtew atua atia Mmarahyɛfo Kunini no a, wobehu amane. Mose ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “[Yehowa, NW] de wo ne wo hene a wubesi no wo so no bɛkɔ ɔman a wo ne w’agyanom nnim so, na ɛhɔ na wobɛsom anyame foforo, nnua ne abo.”—Deuteronomium 28:15, 36.
6. Dɛn nti na Babilon asetra maa Daniel, Hanania, Misael, ne Asaria hyiaa ɔhaw soronko bi?
6 Afei Yudafo no hui sɛ wɔwɔ saa tebea no ara mu. Na ɛbɛyɛ den ama wɔn, ne titiriw no, Daniel, Hanania, Misael, ne Asaria sɛ wobekura wɔn mudi mu ama Yehowa. Na wɔahyɛ da apaw Hebrifo mmerantewa baanan yi sɛ wɔntete wɔn mma ahemfie adwuma. (Daniel 1:3-5) Kae sɛ na wɔama wɔn Babilonfo din mpo—Beltesasar, Sadrak, Mesak, ne Abed-Nego—na ama wɔatra ase ma ɛne tebea foforo a wɔwom no ahyia. * Na ɔman dibea a ɛkorɔn a mmarima yi wɔ no bɛma wɔahu po a wɔbɛpo sɛ wɔbɛsom ɔman no anyame no—na wɔaka mpo sɛ wotutu ɔman no ase pefee.
SIKA HONI BI DE WƆN NKWA TO ASIANE MU
7. (a) Ka ohoni a Nebukadnesar de sii hɔ no ho asɛm. (b) Dɛn nti na ɔyɛɛ ohoni no?
7 Nebukadnesar de sika honi bi sii Dura tataw so a na ɛda adi sɛ ɔpɛ sɛ biakoyɛ a ɛwɔ n’ahemman mu no mu yɛ den. Na ne sorokɔ yɛ mita 27 na ne trɛw yɛ mita 2.7. * Ebinom gye di sɛ na ohoni no yɛ adum anaa nkaedum bi kɛkɛ. Ɛbɛyɛ sɛ na ne fapem no korɔn a onipa honi kɛse bi si so, na ebia na egyina hɔ ma Nebukadnesar ankasa anaasɛ onyame Nebo. Sɛnea ɛte biara no, na nkaedum tenteenten yi yɛ Babilon Ahemman no ho sɛnkyerɛnne. Na ne saa nti, na ɛsɛ sɛ wohu na wɔsom.—Daniel 3:1.
8. (a) Henanom na wɔfrɛɛ wɔn kɔɔ ohoni no anobue ase, na dɛn na na wɔhwehwɛ sɛ wɔn a wɔwɔ hɔ nyinaa yɛ? (b) Na asotwe bɛn na wɔde bɛma wɔn a wɔpo sɛ wɔbɛkotow ohoni no?
8 Enti, Nebukadnesar yɛɛ anobue ho nhyehyɛe. Ɔmaa n’amantam so ahene, mmakoma, amradofo, afotufo, asannaafo, atemmufo, mmarakyerɛfo, ne amansin nyinaa so ahwɛfo hyiaam. Ɛsɛn bi teɛɛm sɛ: “Mo nkurɔfo, aman ne ɔkasa horow, wɔka kyerɛ mo sɛ: ɛbere a mobɛte abɛn, odurugya, ɔsanku, sambuka sanku, bɛnta sanku, bɔtɔwa ne asanku ahorow nyinaa gyigye no, monhwe fam nsɔre sika honi a ɔhene Nebukadnesar de asi hɔ no; na nea ɔrenhwe ase nsɔre no, dɔn no ara mu wɔde no bɛto ogya a ɛrefram fononoo mu.”—Daniel 3:2-6.
9. Dɛn titiriw nti na na ɛsɛ sɛ wɔkotow ohoni a na Nebukadnesar de asi hɔ no?
9 Ebinom gye di sɛ Nebukadnesar yɛɛ guasodeyɛ yi ho nhyehyɛe na ɔde ahyɛ Yudafo no ma wɔapo Yehowa som. Na ɛbɛyɛ sɛ ɛnte saa, efisɛ ɛda adi sɛ wɔn a wɔwɔ dibea wɔ ahenni no mu nkutoo na wɔfrɛɛ wɔn kɔɔ adeyɛ no ase. Enti Yudafo a wɔkɔɔ hɔ no bɛyɛ wɔn a na wɔwɔ dibea bi wɔ ahenni no mu. Ɛnde, ɛte sɛ nea kotow a wɔbɛkotow ohoni no yɛ guasodeyɛ a wɔpɛe sɛ wɔde bɛhyɛ wɔn a wodi tumi no ntam biakoyɛ mu den. Nhomanimfo John F. Walvoord ka sɛ: “Ɔkwan bi so no, na mmapɔmma guabɔ a ɛte saa no yɛ tumi a Nebukadnesar ahemman no wɔ a wɔde anigye da no adi, na ɔkwan foforo so no, na wɔrehyɛ anyame a na wosusuw sɛ wɔn na wɔma wodii wɔn nkonim ahorow no anuonyam.”
YEHOWA NKOA GYINAA PINTINN
10. Dɛn nti na na ɛrenhaw wɔn a na wɔnyɛ Yudafo sɛ wobedi Nebukadnesar ahyɛde no so?
10 Ɛwom sɛ na nnipa a wɔahyia wɔ Nebukadnesar honi no anim no mu dodow no ara som wɔn ankasa anyame de, nanso na ɛrenhaw wɔn sɛ wɔbɛsom ohoni no. Bible ho nimdefo bi kyerɛkyerɛɛ mu sɛ: “Na wɔn nyinaa som ahoni, na na onyame biako som no nsiw wɔn kwan sɛ wɔbɛsom onyame foforo nso.” Ɔtoaa so sɛ: “Na ɛne adwene a abosonsomfo kura saa bere no sɛ anyame pii na ɛwɔ hɔ no hyia . . . na na wonhu asɛm biara wɔ ho sɛ wɔbɛsom nnipa anaa ɔman biara nyame.”
11. Dɛn nti na Sadrak, Mesak, ne Abed-Nego poe sɛ wɔbɛkotow ohoni no?
11 Nanso, na Yudafo mmu no saa. Na wɔn Nyankopɔn a ɔne Yehowa no ahyɛ wɔn sɛ: “Nyɛ ohoni bi anaa ade a ɛwɔ wim wɔ ɔsoro anaa nea ɛwɔ asase so wɔ fam anaa nea ɛwɔ nsu mu wɔ asase ase nsɛso biara mfa; nkotow wɔn, na nsom wɔn. Na me, [Yehowa, NW] wo Nyankopɔn, meyɛ Onyankopɔn ninkufo.” (Exodus 20:4, 5) Enti, bere a wofii dwom no ase na wɔn a wɔahyiam no kotow ohoni no, Hebrifo mmerante baasa no—Sadrak, Mesak, ne Abed-Nego—kɔɔ so gyinaa hɔ.—Daniel 3:7.
12. Dɛn na Kaldeafo bi bɔɔ Hebrifo baasa no sobo sɛ wɔayɛ, na dɛn ntia?
12 Ohoni no a Hebrifo mmapɔmma baasa no ansom no no hyɛɛ Kaldeafo bi abufuw. Wɔkɔɔ ɔhene no nkyɛn ntɛm ara ‘kɔtotoo Yudafo no ano.’ * Na wɔmpɛ nkyerɛkyerɛmu biara atie. Esiane sɛ na Hebrifo no anototofo no pɛ sɛ wɔtwe wɔn aso sɛ wonni nokware na wotutu ɔman no ase nti, wɔkae sɛ: “Yudafo bi wɔ hɔ a wode wɔn asisi Babel asase so hwɛ so, Sadrak, Mesak ne Abed-Nego; mmarima yi mmu wo, ɔhene; wɔnsom w’anyame, na wɔnsɔre sika honi a wode asi hɔ no.”—Daniel 3:8-12.
13, 14. Nebukadnesar yɛɛ n’ade dɛn wɔ nea Sadrak, Mesak, ne Abed-Nego yɛe no ho?
13 Hwɛ sɛnea ɛbɛyɛ sɛ Nebukadnesar hawee sɛ Hebrifo baasa no abu n’ahyɛde so! Na ɛda adi sɛ wantumi amma Sadrak, Mesak, ne Abed-Nego ammɛyɛ wɔn a wɔde nokwaredi gyina Babilon Ahemman no akyi. So na ɔnkyerɛkyerɛɛ wɔn Kaldeafo nyansa? Na wasesa wɔn din mpo! Nanso sɛ Nebukadnesar susuw sɛ ntetee a ɛkorɔn no bɛma wɔahu ɔsom foforo anaa wɔn din a ɔsesae no bɛma wɔasesa wɔn nipasu a, ɛnde na ɔredaadaa ne ho. Sadrak, Mesak, ne Abed-Nego kɔɔ so yɛɛ Yehowa nkoa anokwafo.
14 Ɔhene Nebukadnesar bo fuwii. Ɔma wɔkɔfrɛɛ Sadrak, Mesak, ne Abed-Nego ntɛm ara. Obisae sɛ: “So ɛyɛ mo ɔboayɛ, Sadrak, Mesak ne Abed-Nego, sɛ monsom m’anyame, na monsɔre sika honi a mede masi hɔ no?” Akyinnye biara nni ho sɛ Nebukadnesar de ahodwiriw kɛse na ɛkaa saa asɛm yi. Anyɛ yiye koraa no, obetumi anya adwene sɛ, ‘Ɛyɛɛ dɛn na mmarima baasa a wɔn adwenem da hɔ tumi buu ahyɛde a emu da hɔ pefee saa so—nea ɛsobu ho asotwe yɛ kɛse paa saa?’—Daniel 3:13, 14.
15, 16. Hokwan bɛn na Nebukadnesar de maa Hebrifo baasa no?
15 Na Nebukadnesar wɔ ɔpɛ sɛ ɔbɛma Hebrifo basaa no hokwan bio ma wɔde akotow ohoni no. Ɔkae sɛ: “Afei de, sɛ moasiesie mo ho sɛ bere a mobɛte abɛn, odurugya, ɔsanku, sambuka sanku, bɛnta sanku, bɔtɔwa ne asanku ahorow nyinaa gyigye no, mobɛhwe ase asɔre ohoni a mayɛ no a, . . . na sɛ moansɔre no a, dɔn no ara mu wɔde mo begu ogya a ɛrefram fononoo no mu, na onyame bɛn na obeyi mo afi me nsam?”—Daniel 3:15.
16 Ɛda adi sɛ dae no mu honi (a wɔka ne ho asɛm wɔ Daniel ti 2) no ho asuade no antra Nebukadnesar adwene ne ne koma mu. Ebia na ne werɛ afi asɛm a n’ankasa ka kyerɛɛ Daniel yi dedaw: “Mo Nyankopɔn yɛ anyame mu Nyame ne ahene wura.” (Daniel 2:47) Afei na ɛte sɛ nea Nebukadnesar retwa Yehowa mpoa, na ɔreka sɛ Ɔno mpo rentumi nnye Hebrifo no mfi asotwe a ɔde bɛma wɔn no mu.
17. Sadrak, Mesak, ne Abed-Nego yɛɛ wɔn ade dɛn wɔ hokwan a ɔhene no de maa wɔn no ho?
17 Na enhia sɛ Sadrak, Mesak, ne Abed-Nego san susuw asɛm no ho. Wobua ntɛm ara sɛ: “Enhia yɛn sɛ yebebua wo eyi ho asɛm bi. Hwɛ, yɛn Nyankopɔn a yɛsom no no betumi ayi yɛn afi ogya a ɛrefram fononoo no mu, na obegye yɛn afi wo, ɔhene, nsam. Na sɛ amma saa mpo a, ɔhene, hu sɛ yɛrensom w’anyame, na yɛrensɔre sika honi a wode asi hɔ no.”—Daniel 3:16-18.
WƆDE WƆN GU FONONOO A ADƆ MU!
18, 19. Dɛn na esii bere a wɔde Hebrifo baasa no guu ogya a ɛrefram fononoo no mu no?
18 Esiane sɛ na Nebukadnesar bo afuw nti, ɔhyɛɛ ne nkoa sɛ wɔmma fononoo no nnɔ mpɛn ason nkyɛn daa. Afei ɔhyɛɛ ‘mmarima ahoɔdenfo bi’ sɛ wɔnkyekyere Sadrak, Mesak, ne Abed-Nego na wɔntow wɔn ngu “ogya a ɛrefram fononoo” no mu. Wɔyɛɛ nea ɔhene no hyɛe no, na wɔtow Hebrifo baasa no guu fononoo no mu a wɔakyekyere wɔn na wɔhyehyɛ wɔn ntade nyinaa—ebia sɛnea ɛbɛyɛ na wɔahyew ntɛmntɛm. Nanso, Nebukadnesar aboafo no ankasa mmom na ogyaframa no kunkum wɔn.—Daniel 3:19-22.
19 Nanso, na anwonwasɛm bi rekɔ so. Ɛwom sɛ na Sadrak, Mesak, ne Abed-Nego wɔ ogya a ɛrefram fononoo no mu de, nanso na ogyaframa no nhyew wɔn. Hwɛ sɛnea Nebukadnesar ho dwiriw no! Na wɔatow wɔn agu ogyaframa mu, a wɔakyekyere wɔn papee, nanso wɔda so te nkwa mu. Wɔnenam ogya no mu a hwee nyɛ wɔn! Nanso Nebukadnesar huu biribi foforo. Obisaa ne mmapɔmma no sɛ: “So ɛnyɛ mmarima baasa na yɛkyeree wɔn guu ogya no mu?” Wobuae sɛ: “Ampa, ɔhene.” Nebukadnesar teɛɛm sɛ: “Hwɛ, mihu mmarima baanan a wɔasan wɔn sɛ wɔnennam ogya no mu, na wɔn ho ntɔɔ kyima ɛ, na nea ɔto so anan no tebea te sɛ anyame ba bi.”—Daniel 3:23-25.
20, 21. (a) Dɛn na Nebukadnesar hui wɔ Sadrak, Mesak, ne Abed-Nego ho bere a wopue fii fononoo no mu no? (b) Dɛn na wɔmaa Nebukadnesar gye toom?
20 Nebukadnesar bɛn ogya a ɛrefram fononoo no ano. Ɔfrɛɛ wɔn sɛ: “Sadrak, Mesak ne Abed-Nego, ɔsorosoro Nyankopɔn nkoa, mumfi adi mmra!” Hebrifo baasa no fii ogya no mu puei. Akyinnye biara nni ho sɛ wɔn a wohuu anwonwade yi nyinaa—a amantam ahene, mmakoma, amradofo, ne atumfo ka ho—ho dwiriw wɔn. Hwɛ, na ɛte sɛ nea mmerante baasa yi nhyɛn fononoo no mu mpo da! Wɔante ogya no ho hua wɔ wɔn ho na wɔn ti nhwi biako mpo anhyew.—Daniel 3:26, 27.
21 Afei wɔmaa Ɔhene Nebukadnesar gye toom sɛ Yehowa ne Ɔsorosoroni Nyankopɔn no. Ɔkae sɛ: “Nhyira ne Sadrak, Mesak ne Abed-Nego Nyankopɔn a wasoma ne bɔfo, na wabeyi ne nkoa a wɔde wɔn ho too no so na wɔsakraa ɔhene asɛm na wɔde wɔn honam mae, nea ɛbɛyɛ na wɔrensom na wɔrensɔre anyame biara sɛ wɔn Nyankopɔn.” Afei, ɔhene no de kɔkɔbɔ a emu yɛ den yi kaa ho: “Na me na mehyɛ mmara sɛ ɔman, nkurɔfo ne ɔkasa horow nyinaa mu biara a ɔka Sadrak, Mesak ne Abed-Nego Nyankopɔn ho abususɛm no, wobetwitwa no asinasin, na wɔama ne fi ayɛ sumina, efisɛ Onyankopɔn bi nni hɔ a obetumi agye onipa sɛɛ.” Afei, Hebrifo no san nyaa ɔhene no anim dom na ‘wodii yiye wɔ Babel asase so.’—Daniel 3:28-30.
GYIDI NE SƆHWƐ A EMU YƐ DEN NNƐ
22. Ɔkwan bɛn so na Yehowa nkoa a wɔwɔ hɔ nnɛ hyia tebea a ɛte sɛ Sadrak, Mesak, ne Abed-Nego de no?
22 Ɛnnɛ, Yehowa asomfo hyia tebea a ɛte sɛ Sadrak, Mesak, ne Abed-Nego de no. Ɛyɛ nokware sɛ Onyankopɔn nkurɔfo nni nnommumfa ankasa mu. Nanso, Yesu kae sɛ n’akyidifo renyɛ “wiase no fã.” (Yohane 17:14, NW) Wɔyɛ “ahohɔ,” kyerɛ sɛ wonnye wɔn a wɔne wɔn te amanne, su, ne nneyɛe a ennyina Kyerɛwnsɛm so no ntom. Sɛnea ɔsomafo Paulo kyerɛwee no, ɛnsɛ sɛ Kristofo ‘yɛ wɔn ho sɛ wiase yi.’—Romafo 12:2.
23. Ɔkwan bɛn so na Hebrifo baasa no gyinaa pintinn, na ɔkwan bɛn so na Kristofo a wɔwɔ hɔ nnɛ betumi asuasua wɔn nhwɛso no?
23 Hebrifo baasa no ampene so sɛ wɔbɛyɛ wɔn ade sɛnea Babilonfo nhyehyɛe te. Kaldeafo nyansa a wɔde kyerɛkyerɛɛ wɔn fefeefe no mpo antumi annan wɔn adwene. Na wontumi nsakra wɔn gyinabea wɔ ɔsom nsɛm ho, na na Yehowa nkutoo na wɔsom no. Ɛho hia sɛ Kristofo a wɔwɔ hɔ nnɛ no gyina pintinn saa ara. Ɛho nhia sɛ wɔn ani wu esiane sɛ wɔyɛ soronko wɔ wiasefo no ho nti. Nokwarem no, “wiase ne n’akɔnnɔ retwam.” (1 Yohane 2:17) Enti nyansa nnim na mfaso nni so sɛ yɛbɛbɔ yɛn bra ma ɛne nneɛma nhyehyɛe a ɛretwam yi ahyia.
24. Sɛ wɔde nokware Kristofo gyinabea toto Hebrifo baasa no de ho a, ɛte dɛn?
24 Ɛho hia sɛ Kristofo hwɛ yiye wɔ abosonsom biara, a nea ɛnna adi yiye ka ho ho. * (1 Yohane 5:21) Sadrak, Mesak, ne Abed-Nego de osetie ne obu begyinaa sika kɔkɔɔ honi no anim, nanso wohui sɛ kotow a wɔbɛkotow no no kyɛn obu a wɔde ma kɛkɛ. Na ɛyɛ ɔsom mu adeyɛ, na wɔn ho a wɔde bɛhyɛ mu bɛma Yehowa bo afuw wɔn. (Deuteronomium 5:8-10) John F. Walvoord kyerɛw sɛ: “Na ɛyɛ frankaakyia ankasa, ɛwom sɛ ebetumi akyerɛ biribi nso wɔ ɔsom mu, efisɛ na nsonsonoe biara nni nokware a wodi ma ɔsom ne ɔman mu.” Ɛnnɛ, nokware Kristofo po abosonsom denneennen saa ara.
25. Dɛn na woasua afi Sadrak, Mesak, ne Abed-Nego asetra ho asɛm a ɛyɛ nokware no mu?
25 Bible kyerɛwtohɔ a ɛfa Sadrak, Mesak, ne Abed-Nego ho no yɛ nhwɛso pa ma wɔn a wɔasi wɔn bo sɛ wɔde ɔsom a edi mu bɛma Yehowa no nyinaa. Ɛda adi sɛ na Hebrifo baasa yi ho asɛm na ɛwɔ ɔsomafo Paulo adwenem bere a ɔkaa nnipa pii a wɔdaa gyidi adi, a wɔn a ‘wodum ogya tumi’ ka ho ho asɛm no. (Hebrifo 11:33, 34) Yehowa betua wɔn a wosuasua gyidi a ɛte saa nyinaa ka. Ogyee Hebrifo baasa no fii ogya a ɛrefram fononoo no mu, nanso yebetumi anya awerɛhyem sɛ obenyan anokwafo a wɔhweree wɔn nkwa sɛ mudi mu kurafo no nyinaa na wama wɔn daa nkwa. Sɛnea ɛte biara no, Yehowa ‘hwɛ n’ahotefo kra so, obeyi wɔn afi abɔnefo nsam.’—Dwom 97:10.
^ nky. 3 Ebinom gye di sɛ Marduk a na wobu no sɛ ɔno na ɔkyekyee Babilon Ahemman no ne Nimrod a wɔayɛ no onyame no. Nanso, wontumi nka pefee sɛ saa na ɛte.
^ nky. 6 “Beltesasar” kyerɛ “Bɔ Ɔhene Nkwa Ho Ban.” “Sadrak” betumi akyerɛ “Aku” a ɔyɛ Sumeriafo ɔsram nyame no “Ahyɛde.” “Mesak” betumi ayɛ onyame bi, na “Abed-Nego” kyerɛ “Nego” anaa Nebo “Akoa.”
^ nky. 7 Sɛnea ohoni no kɛse te nti, Bible ho animdefo bi gye di sɛ wɔde dua na ɛyɛe na afei wɔde sika kɔkɔɔ duraa ho.
^ nky. 12 Aram asɛmfua a wɔkyerɛ ase sɛ ‘totoo ano’ no kyerɛ sɛ ‘wɔbɛwe obi honam asinasin’—sɛ wɔbɛwe no denam ntwiri so, sɛ yɛbɛka no saa a.
^ nky. 24 Sɛ nhwɛso no, Bible de adidi ntraso ne anibere toto abosonsom ho.—Filipifo 3:18, 19; Kolosefo 3:5.
• Dɛn nti na Sadrak, Mesak, ne Abed-Nego poe sɛ wɔbɛkotow ohoni a Nebukadnesar de sii hɔ no?
• Nebukadnesar yɛɛ n’ade dɛn wɔ gyinae a Hebrifo baasa no sii no ho?
• Ɔkwan bɛn so na Yehowa tuaa Hebrifo baasa no ka wɔ wɔn gyidi ho?
• Dɛn na woasua afi Sadrak, Mesak, ne Abed-Nego asetra ho asɛm a woatie no mu?
[Mfonini nkutoo na ɛwɔ kratafa 68]
[Kratafa 70 mfonini ahorow]
1. Asɔredan (ziggurat) wɔ Babilon
2. Marduk asɔredan
3. Anyame Marduk (benkum) ne Nebo (nifa) mfonini a wɔde kɔbere ayɛ a egyina atweaseɛ so
4. Nebukadnesar a n’adansi nnwuma ma ogyee din no mfonini
[Mfonini nkutoo na ɛwɔ kratafa 76]
[Mfonini nkutoo na ɛwɔ kratafa 78]
Share Share Ogya Antumi Ansɛe Wɔn Gyidi
dp ti 5 kr. 68-81